Club 3Fa Avaradrano Nahavita fifampiarahabana nahatrarana ny taona 2020
Tanteraka an-tsakany sy an-davany tamin’ny sabotsy 04 janoary 2020 lasa teo ny fifampiarahabana nahatrarana ny taona vaovao 2020 ho
an’ny club 3FA Avaradrano izay notanterahina tao amin’ny kianjan’ny kaominina Ankadikely ka niarahan’ireo tanora mpikambana niaraka tamin’ireo raiamandreny mpiandraikitra ny klioba nifaly havanja. Taorian’ny fiaraha-mivavaka nanombohana ny fotoana ka nirarian-tsoa ny hitondran’ity taona vaovao ity soa sy fanambinana ho an’ny rehetra dia nisy ny lalao ara-pirahalahiana nataon’ny sokajy 13, 15 taona ary ny vehivavy sy ny senior ary ny veteran. Namaranana ny fotoana kosa tamin’io sabotsy io ny fiaraha-nisakafo tao amin’ny EPP Ambohitrarahaba ka nandritra izany dia nisy ny fanolorana akanjo fanaovana fanazarantena vaovao mba hanomezana hery ireo mpilalao. Tsara homarihina fa ny club 3FA Avaradrano dia anisan’ireo ekipa efa ela nitaizana tanora satria tamin’ny taona 1991 no niforonany tao Ambohitrarahaba ary mbola ao amin’ity toerana ity hatrany ny adiresy ahitana azy hatramin’izao. Handray ny faha-29 taonany izao ny klioba amin’ny famolavolana sy fitaizana ireo tanora eo amin’ny taranja baolina kitra izay ahitana ny sokajy 6 , 8 , 10 , 13 , 15 , 17 , 20 taona ary ny senior sy ny véteran sy vehivavy. Nanamafy hatrany ny Tompon’andraikitra voalohany Rakotonirina Harison Philibert fa hiezaka hanatsara sy hanao ny tsaratsara kokoa noho ny efa vita izy ireo amin’ity taona 2020 ity.
Voka-dalao ara-pirahalahiana tamin’ny 04 janoary teo :
Sokajy 13 taona : 3fa Avaradrano vs Cftfc Anatihazo Isotry (0-2)
Sokajy 15 taona : 3fa Avaradrano vs Cftfc Anatihazo Isotry (0-0)
Sokajy Vehivavy : 3fa Avaradrano vs Cftfc Anatihazo Isotry (1-1)
Sokajy senior : 3fa Avaradrano vs Cftfc Anatihazo Isotry ( 5-5)
Sokajy véteran : 3fa Avaradrano vs Fc Ankadikely (2-3)